SEO vs PPC: Xeelado kala duwan miyay si fiican u wada shaqayn karaan? Keebaa Wanagsan? | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/SEO vs PPC: Xeelado kala duwan miyay si fiican u wada shaqayn karaan? Keebaa Wanagsan?
SEO vs PPC: Xeelado kala duwan miyay si fiican u wada shaqayn karaan? Keebaa Wanagsan?
0 Daqiiqado 7 ayaa akhriyay
Maalgeli kor u qaadista natiijooyinka ama u dhis si tartiib tartiib ah oo dabiici ah?
Suuqgeeyayaashu waxay inta badan weydiiyaan su'aashan. Ka dib oo dhan, labada doorasho ayaa waxtar leh.
Tartanka SEO vs PPC wuxuu abuuraa doodo badan oo xiiso leh, laakiin waa muhiim in la yiraahdo: uma baahnid inaad doorato dhinac.
Kooxo badan oo suuqgeyneed ayaa go'aansada inay isku daraan labadan xeeladood waxayna inta badan gaadhaan natiijooyin waaweyn.
Weli, had iyo jeer waa muhiim in la qiimeeyo macnaha guud ee ganacsigaaga.
Shirkadaha qaarkood waxay door bidaan in aanay maalgelin ama lahayn miisaaniyad suuqgeyn xaddidan. Kuwa kale, dhanka kale, waxay rabaan natiijooyin degdeg ah oo wax walba ku maalgeliyaan kor u qaadida lacagta.
Iyadoo aan loo eegin xaqiiqada shirkaddaada, fahamka wax badan oo ku saabsan isbarbardhigga SEO vs PPC waa lama huraan. Sidaa darteed, nuxurkaani wuxuu dabooli doonaa mawduucyada soo socda:
SEO waxay u taagan tahay Hagaajinta Mashiinka Raadinta, farsamooyin iyo ficillo isku dhafan oo loogu talagalay hagaajinta iyo hagaajinta boggaga internetka si ay ugu sarreeyaan Google's SERP.
Marka aan ka hadalno SEO sida shaqo dalbasho, waxaan ka hadalnaa ficilkan soo noqnoqda si loo soo jiito taraafikada.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto in dad badan ay aasaasaan barta blog-ka ee shirkaddaada, waxa ku jira waxa ay u baahan yihiin in loo hagaajiyo shabakadda.
Xaaladdan oo kale, waa lagama maarmaan in diiradda la saaro xuduudaha aasaasiga ah ee SEO, sida:
isticmaalka cinwaanka qoraalka.
isticmaalka ereyada muhiimka ah.
dhismo xiriir wanaagsan.
scannability ee cutubyada.
Dib-u-habayntan iyo hagaajintan waxay ku fidsan tahay qaybaha kale duwan ee goobta iyo boggaga internetka.
Ujeedada shaqadani waa mid keliya: in la waafajiyo waxa ku jira iyo boggaga heerarka ay tixgeliyeen algorithms Google.
Haddii aad rabto in boggaaga, ama bogag gaar ah, ay ku jiraan natiijooyinka ugu sarreeya ee Google's SERP, waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto SEO.
Hagaajintan ayaa hubin doonta in dadku marka hore arki doonaan goobtaada, halkii aad ka ahaan lahayd kuwa kula tartamaya'.
SEO sidoo kale waxay diiradda saartaa taraafikada organic
Marka kooxaha suuq-geynta ay ka shaqeeyaan hagaajinta SEO, waxaa sidoo kale jira hadafka lagu hubinayo taraafikada dabiiciga ah, taas oo macnaheedu yahay in dadka la keeno goobtaada iyada oo aan lacag la gelin.
Mid ka mid ah hagaajinta aad ku qabato habka SEO-ga lama bixiyo.
Waxay yihiin uun hagaajin farsamo iyo semantic taasi waxay ka dhigi doontaa boggaga iyo nuxurka si ka sii wanaagsan loo waafajiyo waxa Google uga baahan yahay bogagga.
Haddii boggagaagu ku filan yihiin fikradaha aasaasiga ah ee SEO, Google wuxuu u eegi doonaa inuu si fiican u qiimeeyo goobtaada.
Shaqadani waxay soo saari doontaa muuqaal badan oo shirkadda ah, taasoo ka dhigaysa dad badan inay ogaadaan astaanta oo booqda goobta.
Haddii la sameeyo si joogto ah iyo dadaal, si tartiib tartiib ah iyo shaqada dabiiciga ah waxay dhalin doontaa taraafikada wanaagsan iyada oo aan qarashka ku kacayn.
Waa maxay PPC?
PPC waxay u taagan tahay Pay per Click, taas oo ah sida saxda ah ee istaraatiijiyadu u shaqeyso.
Waxaad u baahan tahay inaad bixiso si ay goobtaadu uga muuqato shabakada bandhigga Google.
Haddaba, mar kasta oo uu qof baadho isagoo isticmaalaya erey aad u diiwaan gashan tahay ereyga muhiimka ah ee ololahaaga, SERP ayaa tusi doonta nuxurkaaga.
Istaraatiijiyadan, halkii aad ka shaqayn lahayd hagaajinta taas oo siin doonta sumcad dheeraad ah goobtaada, waxaad si fudud u bixineysaa si aad u hesho sumcadda SERP.
Waa inaad ku abuurtaa ololeyaasha PPC ee Google Ads, oo ah aalad aasaasi u ah diiwaangelinta ereyada muhiimka ah ee ku xidha goobtaada dadka xiisaynaya.
Mar kasta oo isticmaaluhu uu gujiyo isku xirka xayeysiiskaaga, Google ayaa lacag kugu soo dalacaya.
Ololahaaga Google Ads, waxaad dejin doontaa miisaaniyad, xayeysiiskaagana si isdaba joog ah ayay u soo muuqan doontaa ilaa iyo inta miisaaniyad la heli karo.
Lacag la'aan, ma jiro gaadiid
Xayeysiisyada PPC waxay ka muuqdaan natiijooyinka SERP ka hor dhammaan natiijooyinka kale ee dabiiciga ah. Ka dib oo dhan, waxaad bixinaysaa caannimadan.
Sidaa darteed, ilaa inta ololahaagu haysto miisaaniyad la heli karo, isku xirkaagu wuu kor u qaadi doonaa oo isla markiiba u muuqan doona qof kasta oo raadiya ereyada muhiimka ah ee aad dooratay.
Ololayaasha PPC, waxaad u baahan tahay inaad qeexdo inta ay ololahani socon doonaan iyo inta miisaaniyadaada ay isticmaali doonaan.
Taas macnaheedu waa, marka wakhtiga ololaha ama miisaaniyada dhammaato, xayeysiiskaaga ma soo muuqan doono, xitaa haddii dadku ay raadiyaan isku midka saxda ah ee ereyada muhiimka ah ee aad ka diiwaan gashan tahay ololahaaga.
Ka dib oo dhan, Waa maxay Xeeladda ugu Wanaagsan ee Suuqgeynta Dijital ah: SEO ama PPC?
Go'aaminta doorashada isbarbardhigga SEO vs PPC ma fududa.
Xaaladdu way ka sii dari doontaa marka dadku aanay fahmin in xeeladahani ay dhab ahaantii is dhammaystirayaan.
Sida kuwa kale Suuq Digital Istaraatiijiyada, SEO iyo PPC waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaare.
Ogaanshaha sida loo falanqeeyo arrimahan waxay siinaysaa kooxaha suuq-geynta awoodda inay si fiican u maalgeliyaan miisaaniyadooda oo ay u huraan dadaallada si xeeladaysan.
Hoos waxaad ka heli doontaa waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato faa'iidooyinka iyo khasaaraha labadan farsamo si faahfaahsan.
➤ SEO faa'iidooyinka
SEO waa hal maalin oo dadaal ah, iyo ficil shirkad kasta oo internetka ah waa inay abuurtaa.
Waa lagama maarmaan in laga shaqeeyo hagaajinta shabakada xitaa haddii aad sidoo kale rabto inaad maalgashato PPC.
Marka, marka hore: waxaad dooran kartaa PPC, laakiin marnaba ma joojin kartid samaynta hagaajinta SEO ee boggaga internetka.
Si kasta oo aad si joogto ah u maalgeliso isku-xiryada la kafaala qaaday, arrimo badan oo kale ayaa dammaanad qaadi doona bog si wanaagsan loo qiimeeyo.
SEO waa waxa u ogolaanaya goobtaada inay la kulmaan heerarka ka dhigaya bogga Google-saaxiibtinimo.
Markaa shaqadan SEO ee joogtada ah, waxaa jira faa'iidooyin badan iyo arrimo kale oo aan dhiirigelin lahayn. Aan ku bilowno faa'iidooyinka:
Waa lacag la’aan
Waxba kuma kharash garayso markaad samaynayso hagaajinta SEO. Inta badan shaqadu waa la socodka natiijooyinka, marka loo baahdo, waxaad samaynaysaa hagaajin gaar ah.
Markaad abuureyso nuxur, kaliya waa inaad ka shaqeysaa tilmaamaha SEO iyo shuruudaha.
Taas ka sokow, SEO ROI aad ayuu u fiican yahay.
Way fududahay in la fahmo
Waxaa jira macluumaad badan oo laga heli karo internetka oo ku saabsan xuduudaha SEO ee ugu muhiimsan ee nuxurka iyo boggaga.
Ilaa inta algorithms-yadu ay had iyo jeer soo bandhigaan cusboonaysiinta, bulshadu waxay si dhakhso ah u ogaataa oo u wadaagtaa macluumaadka ku saabsan shuruudahan cusub.
Waxay dammaanad qaadaysaa muuqaalka iyo wacyigelinta sumadda
Shaqada SEO ee joogtada ah waxay ku dhejin kartaa boggagaaga ugu sarreeya SERP, kaas oo dammaanad qaadaya wacyigelinta astaanta.
Wacyigelinta calaamaddu waxay abuurtaa gaadiid joogto ah, taas oo muhiim u ah dadka inay la socdaan summadaada.
Waxay bixisaa khibrad isticmaale oo ka wanaagsan
SEO sidoo kale waxay la xiriirtaa khibradda bogagga.
Hagaajinta goobta ayaa dadka u horseedi doonta inay si fiican u qiimeeyaan shirkaddaada, sidaas darteed, samee beddelaadyo badan.
Waxay kordhisaa CTR-gaaga
Isticmaalayaasha mareegaha ayaa wax badan ku dhejiya isku xirka organic maadaama ay aad ugu kalsoon yihiin.
Si kale haddii loo dhigo, CTR-gaagu aad ayuu uga sarreeyaa marka loo eego xeeladaha PPC.
➤ khasaarooyinka SEO
Hadda, marka loo eego khasaaraha SEO:
Lama saadaalin karo
Isbeddellada joogtada ah iyo cusboonaysiinta xuduudaha algorithm ee Google ayaa ka dhigaya shaqada mid aad u daal badan waxayna si lama filaan ah u sababi kartaa bogaggaaga inay lumiyaan boosas.
Qof kasta oo kale ayaa samaynaya
Dhammaan tartamayaashaadu waxay samaynayaan SEO, markaa tartanku wuu sarreeyaa wuxuuna u baahan yahay shaqo maalmeed iyo guul.
Uma muujin doonto natiijooyin degdeg ah
SEO waa istaraatiijiyad organic ah iyo ogaanshaha natiijooyinka waa wax waqti qaadanaya.
Mararka qaarkood waxay ku qaadan doontaa dhawr bilood inaad aragto boggagaaga oo si fiican ugu sarreeya SERP.
Adiga kaliya kuma xirna
Waa muhiim in la helo maamulka domain si loo darajo ka wanaagsan oo ka sii wanaagsan.
Shaqadani waxay u baahan tahay xeelado sida boostada martida iyo helitaanka backlinks, taas oo sidoo kale u baahan dadaal.
➤ PPC faa'iidooyinka
Maalgeli oo hel natiijooyin degdeg ah?
Tani waa xaalad ku habboon, waana sababta ay shirkaduhu si joogto ah u maalgashadaan PPC.
Waa wax aan la dafiri karin muhiimada ay leedahay samaynta miisaaniyada loo heli karo ololeyaasha lacagta lagu bixiyo, gaar ahaan tartanka sii kordhaya.
Sidaa darteed, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan tilmaamno faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay leedahay istaraatiijiyadan. Waa kuwan faa'iidooyinka PPC:
Waa hab fudud
Ilaa inta aad maalgelinayso, raadinta ayaa kicin doona ereyada muhiimka ah iyo xiriiriyeyaashaada kafaala qaaday waxay ahaan doonaan meesha ugu sareysa Google's SERP.
Waxay la tacaalaysaa natiijooyin dhab ah oo degdeg ah
Mar kasta oo gujisyo badan ay helaan isku-xiryadaadu, way fiicnaan doontaa inay Google qiimeyso.
Natiijooyinkani waxay ka dhigan yihiin aragtiyo badan, Google-na wuxuu si fiican u dhalin doonaa ololahaaga.
Waxay ku siinaysaa inaad wax ka maamusho
Waxaad u koontarooli kartaa miisaaniyadaada ololaha sidaad rabto, oo ay ku jirto dejinta inta xayaysiisyadu socon doonaan.
Taas ka sokow, qaybta PPC waa mid aad u wanaagsan oo hubinaysa inaad soo jiidato kaliya qasabno iyo taraafikada u qalma.
Way ku fiican tahay ganacsiga e-commerce
Waxaad ku samayn kartaa xayaysiisyada Google Shopping oo muujinaya alaabtaada sawiro iyo xidhiidh toos ah oo lala yeesho ganacsigaaga e-commerce.
➤ Qasaarooyinka PPC
Waa kuwan khasaarooyinka PPC:
Waxay noqon kartaa qaali
Maalgelinta ayaa socota, tani waxay u baahan doontaa xoogaa lacag ah.
Xayeysiintu waxay celin karaan dadka
Isticmaale kastaa ma gujiyo xayeysiisyada Kuwo badan ayaa door bida xiriiriyeyaasha organic.
Si sax ah uma soo saarto saameyn waarta
Waxaad ku heli kartaa natiijooyin la taaban karo oo keliya SEO.
PPC ma aha mid wax ku ool ah mustaqbalka fog haddii aysan jirin wax hagaajin ah oo SEO ah.
Dhagsigu lama mid aha beddelka
PPC waxay helaysaa dhagsiin badan, laakiin taasi macnaheedu maaha beddelaad.
Haddii waxa ku jira mareegahaagu uu xun yahay ama aanu keenin waxa isticmaaluhu filayo, ma dhalin doontid iib.
Tani ma fiicna, sababtoo ah gujinta ayaa kugu dallaci doonta, laakiin ma heleysid natiijooyin la taaban karo.
PPC ma horumarisaa SEO?
PPC ma laha saameyn toos ah SEO.
Markaad maalgeliso isku xirka la kafaala qaaday, dhammaan Google-ku sameeyo waa in lagu darajo kelmada furahaaga diiwaangashan xagga sare ee SERP haddii isticmaalayaashu ay raadiyaan ciyaarta saxda ah.
Markaa, haddii aad joojiso maalgashiga PPC oo aadan haysan istiraatiijiyad SEO midaysan, ma jiraan wax dammaanad qaadaya in isku-xireyaasha isku midka ah ay ku darajo sareyn doonaan SERP iyada oo aan la kicin.
Ka digtoonow inaad si fiican ugu darajeyn karto shaqada SEO oo kaliya oo aan lahayn PPC, waxayna qaadan doontaa xoogaa waqti ah.
Laakin haddii aadan maalgelin SEO-ga oo ololahaaga PPC uu dhammaado, xiriirintaada ayaa hubaal ah inay ka lumi doonaan SERP.
Isku soo wada duuboo: SEO vs PPC? Waa kee doorashada ugu fiican?
Shaki la'aan, doorashada ugu fiican waa in la isku daro labada xeeladood.
SEO waa shaqo joogto ah oo ka caawisa inay xoog siiso goobtaada. Tani, waxaad heleysaa awood dheeraad ah, waxaad heleysaa bogag bixiya waayo-aragnimada wax raadinta ee weyn oo hel beddelaadyo.
Isla mar ahaantaana, PPC waa hab lagu helo taraafig degdeg ah iyo gujisyo. Marka isticmaalayaashu yimaadaan goobtaada, waxay u baahan yihiin inay helaan jawi saaxiibtinimo.
SEO iyo PPC, marka la isku daro, waxay ka dhigan tahay taraafikada degdega ah iyo kordhinta beddelka!
Kooxaha suuqgeyntu waxay u baahan yihiin inay fahmaan taas. SEO vs PPC ma aha khilaaf, laakiin laba xeeladood oo ay tahay in ay ku kulmaan midba midka kale.
Tani waa habka lagu helo bogag sumcad leh oo had iyo jeer ka soo muuqan kara shabakadda.
Hadda, ka waran ogaanshaha sida Google uu u qiimeeyo goobtaada? Baro waxa Tilmaamaha Qiimaynta Tayada!
Baro sida gurguuran karo iyo tilmaamid la'aantu u wanaajiso mareegahaaga
Dejinta Dukaan Dukaan Gaarka ah oo La Heli Karo
saac ka hor 14
saac ka hor 17